Lenovo dia nanambara ny Moto E3 vaovao | Androidsis
Nanambara ny Moto E3 vaovao miaraka amin'ny chip quad-core, efijery 5 ″ ary Android 6.0 Marshmallow
Manuel Ramirez | | Motorola, About us, Android Version
Toa tian'i Lenovo izany milalao saka sy totozy miaraka amin'ny anarany, satria amin'ny famoahana sasany dia toa maneno toa ny mametraka azy ireo na dia ao anaty lasopy aza, ka amin'ny dokambarotra hafa dia mampiseho ny zorony fotsiny izany ary tavela isika manontany tena hoe aiza no nahatonga an'ity mpamokatra ity nahazo an'i Motorola hitazona izany telefaona avy amina kalitao tena tsara, vidiny lafo ary tena kinova Android tena madio. Vao iray volana lasa izay dia fantatsika fa i Lenovo nanambara ny Moto Z Force miaraka amin'io endrika mampiavaka azy ao aoriany io izay manafenany ny solomaso fakantsary, amin'izao fotoana izao sisa tavela amin'ny Moto E3 isika.
Ary farany, ny Moto E3, na Moto E 2016, dia efa ofisialy. Anisan'ireo mampiavaka azy no ahitantsika a Efijery HD 5 inch, puce quad-core ary kinova Android 6.0 Marshmallow. Izy io koa dia misy famaritana hafa toy ilay fakan-tsary 8 megapixel ao aoriana miaraka amin'ny flash LED ary eo anoloana 5 MP. Ary hanolotra fanohanana SIM roa arakaraka ny tsena hizarana azy io. Ny endriny dia mbola mitovy amin'ny andiana Moto G4, noho izany dia telefaona mahazatra izy io.
Ny mampiavaka azy hafa dia ny fonosana izay hitantsika tamin'ny finday avo lenta Moto, a mpandahateny eo aloha ary mifandraika amin'ny bateria dia manana 2.800 mAh izy. Moto E3 izay miala amin'ny 4,5 santimetatra amin'ilay maodely taloha ka hatramin'ny 5 ″, manampy puce quad-core ary mandroso mandroso ho an'ny sary tsaratsara kokoa miaraka amin'ireo 8 megapixels ao amin'ny fakan-tsary any aoriana.
Moto E3 famaritana
Efijery HD IPS 5-inch (1280 x 720)
Fakan-tsary 8 MP aoriana misy jiro LED
Fakantsary 5 MP
Fijerena feo 3,5mm
4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0 LE, GPS
Satria te-hahalala ny vidiny ianao, ankoatry ny fahatongavanao amin'ny loko roa, mainty sy fotsy, dia hamidy amin'ny fiandohan'ny volana septambra any Etazonia ho an'ny vidiny eo ho eo, amin'ny fifanakalozana, avy amin'ny 132 dolara. Ny Moto G4 Play dia ho tonga amin'ny tapaky ny volana aogositra amin'ny vidiny 172 dolara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Nanambara ny Moto E3 vaovao miaraka amin'ny chip quad-core, efijery 5 ″ ary Android 6.0 Marshmallow
Fallout Shelter dia nohavaozina miaraka amin'ny rafitra ady vaovao, ny iraka ary maro hafa
Pokémon GO dia manakaiky an'i Eropa; natomboka tany UK sy Alemana